Xaaladda caafimaad ee Pele oo aan wanaagsanayn, xilli karaantiil la geliyay…. (Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
Xaaladda caafimaad ee Pele oo aan wanaagsanayn, xilli karaantiil la geliyay…. (Sidee wax u jiraan?)
(Guaruja) 21 Mar 2020. Halyeyga kubadda cagta Brazil ee Pele ayaa lagu karaantiillay hoyga uu ka degganyahay magaalo xeebeedka Guaruja, waxaana qoyskiisa ay aad uga welwelsan yihiin in caabuqa coronavirus uu saameeyay caafimaadkiisa.
80-sano jirkan ayaa wajahaya halis badan, maadaama dadka ugu badan ee u geeriyooday xanuunkan dunida ku faafay ay yihiin kuwa da’diisa jira, xaaladdiisana ay liidato.
Dhammaan qorshooyinkiisii ka qayb galka dhacdooyinka ayaa la filayaa in la joojiyo, xilli wiilkiisa Edinho toddobaadyo ka hor uu sheegay inuu aabbihii xanuun dareemay bilooyinkii u dambeeyay.
“Xoogaa waa uu yara tabar dhigay, marka la arko awoodda jirkiisa,” ayuu Edinho u sheegay Globoesporte.
“Dhowaan wuxuu maray qaabeyn lagu sameeyay sintiisa, hase ahaatee kama muuqato dardar uu ku soo kabanayo, jir ahaanna daciifnimo badan ayaa haysata, taasna waxay nagu abuurtay welwel badan.” ayuu hadalkiisa ku daray wiilka uu dhalay Pele.
Edinho guud ahaanba waxa uu dafiray xaaladda caafimaad ee haysata aabbihii inay tahay caabuqa Coronavirus, balse aysan meelna u dhaqaaqi karin, maadaama dadka reer Brazil oo idil lagu amray inay ku jiraan guryahooda.
Pele ayaa sidoo kale dadka ka fikiraya xaaladdiisa ku wargeliyay inuusan qabin dhibaato weyn, da’diisa dadka jirana ay marwalba la kulmaan xaalado caafimaad-darro oo kala duwan.